Akụkọ - Isi nke FFU na Nhazi Sistem
Gịnị bụ Fan Myọcha Unit?
Ngwunye ihe ntanetị ma ọ bụ FFU dị mkpa ihe ntanetị na-agbapụta laminar yana igwe ọkụ na moto. Onye ofufe na moto dị n’ebe ahụ iji merie nrụgide static nke ntụgharị HEPA ma ọ bụ ULPA. Nke a bara uru na retrofit ngwa ebe ike ofufe dị ugbu a site na ikuku njikwa ezughi oke iji merie nyo nsogbu dobe. FFU dabara adaba maka owuwu ohuru ebe achọrọ mgbanwe ikuku dị elu na gburugburu ebe obibi dị ọcha. Nke a gụnyere ngwa dịka ụlọ ọgwụ ọgwụ, ebe a na-emepụta ọgwụ na micro electronic ma ọ bụ ụlọ ọrụ nrụpụta ndị ọzọ. A pụkwara iji FFU mee ngwa ngwa na ngwa ngwa kwalite nhazi ọkwa nke ISO naanị site na ịgbakwunye nkeji ntanetị n'uko ụlọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ISO gbakwunye 1 na 5 ụlọ dị ọcha maka ụlọ niile ka kpuchie ya na mpaghara nzacha site na iji FFU kama ịbụ onye na-ahụ maka ikuku ikuku iji nye mgbanwe mgbanwe ikuku. Enwere ike belata oke nke njikwa ikuku. Na mgbakwunye na ọtụtụ FFU ọdịda nke otu FFU adịghị emebi ọrụ nke sistemụ niile.
Typicaldị usoro ime ụlọ dị ọcha bụ iji plenum na-adịghị mma ebe FFU na-adọta ikuku gburugburu site na nlọghachi azụ, wee jikọta ya na ọnọdụ mejupụtara ikuku site na njikwa ikuku. Otu uru dị mma nke nsogbu FFU plenum nkịtị bụ na ọ na-ewepụ ihe egwu nke mmetọ na-esite na plenum dị n'uko gaa oghere dị ọcha n'okpuru. Nke a na - enye ohere iji sistemu ụlọ dị oke ọnụ ma sie ike iji mee ihe. N'aka nke ọzọ maka nrụnye na nkeji ole na ole.
Enwere ike ịgbanye FFU site na njikwa ikuku ma ọ bụ ngwaọrụ ọnụ. Nke a bụ ezigbo maka retrofit ngwa ebe ohere a na-kwalite si na-abụghị nyo laminars ka ducted FFU. FFU na-adịkarị na nha atọ, 2ft x 2 ft, 2ft x 3 ft, 2 ft x 4ft ma hazie ya ka ọ daba na nhazi nke ụlọ kwụsịtụrụ. A na-ahakarị FFU maka 90 ruo 100 FPM. Maka ihe kachasị ewu ewu nke 2ft x 2 ft nke a ruru 480 CFM maka ụdị ihe ngbanwe nke akụkụ. Mgbanwe nzacha bụ akụkụ dị mkpa nke mmezi oge niile.
E nwere ụdị FFU abụọ dị iche iche na-akwado nza nza na ụzọ dị iche iche. Sidedị akụkụ a na-agbanwe dochie anya ụlọ na-enye ohere ịnweta nzacha site n'akụkụ ime ụlọ na-enweghị imebi iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ụlọ. Roomlọ n'akụkụ nke mbughari nkeji Njirimara ihe etinyere mma onu nke na-etinye aka na nyo gel akara iji hụ na njikọ njikọta enweghị. A ga-ewepụ Bench n'elu replaceable nkeji n'uko iji dochie nyo. Bench top replaceable nzacha nwere 25% ọzọ iyo mpaghara nke na-enye ohere maka elu ikuku eruba udu.
Nhọrọ ọzọ ị ga-ele anya mgbe ị na-ahọrọ otu fan bụ ụdị moto eji. PSC ma ọ bụ AC ụdị ụdị moto bụ nhọrọ nhọrọ akụ na ụba. ECM ma ọ bụ moto na-enweghị ntụpọ DC bụ nhọrọ arụmọrụ dị elu yana ndị na-arụ ọrụ ntanetị nke na-ebuli arụmọrụ moto ma nye ohere maka mmemme moto. Mgbe ị na-eji ECM, enwere mmemme moto abụọ. Nke mbụ bụ na-adị mgbe niile. The mgbe nile eruba nke moto omume na-ekwusi na airflow site na ofufe nyo unit onwe ha nke static mgbali dị ka nyo ibu. Nke a bụ ezigbo maka adịghị mma mgbali nkịtị plenum aghụghọ. Nke abụọ moto mmemme bụ mgbe niile torque. The mgbe nile torque moto mmemme na-ekwusi ike na torque ma ọ bụ rotational ike nke moto onwe ha nke static mgbali dị ka nyo ibu. Iji na-enwe mgbe nile ikuku eruba site na ofufe nyo unit na a mgbe nile torque mmemme, ihe upstream mgbali onwe ha ọnụ ma ọ bụ venturi valvụ a chọrọ. Ekwesighi ịduzi FFU nke nwere usoro ihe eji agbanwe agbanwe mgbe niile na ngwaọrụ nnwere onwe nke onwe ya, n'ihi na nke a na - akpata ma smart ngwaọrụ ịlụ ọgụ maka njikwa ma nwee ike ibute oscillation ikuku na arụmọrụ adịghị mma.
Na mgbakwunye na nhọrọ moto enwere ụzọ nhọrọ abụọ. Wheelskwụ ụkwụ na-aga n'ihu bụ nhọrọ ọkọlọtọ ma dakọtara na igwe EC na usoro mmemme mgbe niile. Kwardlagharị ụkwụ na-agba ọsọ na-adabaghị na usoro mmemme moto na-aga n'ihu bụ nhọrọ dị ike karị.
FFU enwewo mmụba na-ewu ewu n'ihi ume ha na-arụ ọrụ nke ọma ma belata ihe ndozi nke oge site na sistemụ ikuku ikuku. Designdị modular nke FFU sistemụ na-enye ohere maka ngbanwe dị ọsịsọ ma dịkwa nfe na ọkwa ISO maka ụlọ ọcha. FFU nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru na nhọrọ nke na-enye ohere maka ịmezigharị usoro nke usoro yana njikwa njikwa nhọrọ na-enye ohere ịmalite ngwa ngwa na ọrụ, yana njikwa na nlekota nke usoro ahụ n'oge ọrụ.